ZEPETO ကစားတဲ့သူတွေအတွက် Codashop ရဲ့ ဆောင်းအကုန်ဖက်ရှင်ရှိုး | Codashop Blog MM
Home News ZEPETO ကစားတဲ...
ZEPETO ကစားတဲ့သူတွေအတွက် Codashop ရဲ့ ဆောင်းအကုန်ဖက်ရှင်ရှိုး
ZEPETO ကစားတဲ့သူတွေအတွက် Codashop မှစီစဥ်တင်ဆက်တဲ့ ဆောင်းအကုန်ဖက်ရှင်ရိုးလာပါပြီ!
အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆောင်းရာသီက နွေရာသီနဲ့မခြားပါဘဲ။ ဒါကြောင့်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာလိုမျိုး ဆွယ်တာအထူကြီးတွေ၊ အမွှေးပွအင်္ကျီ တွေ စတဲ့ဖက်ရှင်မျိုးတွေဝတ်ဆင်ဖို့ အခွင့်အ‌ရေးသိပ်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ZEPETO မှာဆိုရင်တော့ သင့် Avatarအရုပ်ကို သင်ကြိုက်တဲ့ ဖက်ရှင်ပုံစံမျိုး ဆင်ယင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘော်ဒါတို့ရဲ့ စိတ်ကူးထဲက ဆောင်းရာသီဖက်ရှင်လေးကို ZEPETO မှာဖန်တီးပြီးတော့ Codashop ရဲ့ ဆောင်းအကုန်ဖက်ရှင်ရိုးပွဲမှာ ပါဝင်ပြသလိုက်ပါ! ဖက်ရှင်အကျဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်(၅)ဦးကတော့ 125ZEMS လက်ဆောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
👉 ဒီပိုစ့်ရဲ့ ကောမင့်မှာပေးထားတဲ့ နောက်ခံစတိတ်ပုံကိုအသုံးပြုပြီး ZEPETO ထဲမှာ ဆောင်းရာသီဖက်ရှင်နဲ့ ရုပ်ပုံဖန်တီးပါ။
👉 ထိုရုပ်ပုံကို ZEPETO ထဲမှာပဲ #CodashopWinterFashion ဆိုတဲ့ Hashtag နဲ့အတူ ပိုစ့်တင်လိုက်ပါ။
👉 ZEPETO ထဲမှာပိုစ့်တင်ထားတဲ့ Screenshot ကို ကိုယ့်ရဲ့ ZEPETO Code နဲ့အတူ အစီအစဥ်ကြေညာတဲ့ Facebook ပိုစ့်အောက်မှာ Comment ပေးပါ။
ဖက်ရှင်အကျဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်(၅)ဦးကို Codashop မှရွေးချယ်ပြီး 125ZEMS လက်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဥ်ကို ၂၀၂၂၊ ဖေဖော်ဝါရီ(၅) မှ (၁၁)ရက်နေ့အထိ ပါဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
125ZEMS လက်ဆောင်ရရှိသူများကို Codashop Myanmar Facebook Page မှာပဲ ပိုစ့်တင်ပြီးကြေညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကြေညာပြီး (၂)ပတ်အတွင်း ထိုလက်ဆောင်ရရှိသူရဲ့ ZEPETO Code ထဲသို့ တိုက်ရိုက် 125ZEMS ကိုတိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Comment မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ZEPETO Code ကိုတစ်ခါထဲထည့်ရေးပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
Previous articleCodashop ရဲ့ Instagram Follower Milestone ဖုန်းဘေလ်(၅,၀၀၀)ကျပ် Giveaway
Next articleCodashop မှာ MPT ဖုန်းဘေလ်နဲ့ ကြိုက်တဲ့ ဂိမ်း Item တွေဝယ်ပြီး 100% Data Cashback ရယူလိုက်ပါ! 🥳